WARBIXIN: Waa Maxay Sababta Dhabta Ah Ee Bayern Munich Loogu Yeedho "Kooxda Yahuuda"? Maxaad Ka Ogtahay Xidhiidhka Bayern Iyo Yahuuda Ka Dhexeeya? - Gool24.Net
WARBIXIN: Waa Maxay Sababta Dhabta Ah Ee Bayern Munich Loogu Yeedho “Kooxda Yahuuda”? Maxaad Ka Ogtahay Xidhiidhka Bayern Iyo Yahuuda Ka Dhexeeya?
February 18, 2019 Saed Balaleti
Bayern Munich waxa Jarmalka ku leedahay ku dhawaad 12 milyan taageerayaal ah, waana tiro ay kor u dhaafayaan kaliya taageerayaasha sida dhabta ah u neceb kooxda. Si ka fiican oo ay filan laheyd Bayern Munich ma jirto, waxa ay ku faanaan inay yihiin Bavarian waxaana loo arkaa inta badan kuwa isla weyn iyagoo isku tilmaama inay yihiin qoys islamarkaana adeegsada ereyada sida “anaga iyo iyaga”.
Suuqgeyntooda aadka u balaaran iyo guulahooda ay ku gaaraan garoonka ayaa Bayern Munich ka dhigay mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn dunida, waxaana ay matalayaan jiilkii dahabiga ah ee Galbeedka Jarmalka ee uu hogaamin jiray Franz Beckenbauer sannadihii 70meeyadii iyo balanqaadka jiilka cuusb.
Laakiin waxaa jirta dhan kale oo aad uga duwan arintaan oo ku saabsan kooxda “FC Hollywood” waana taariikh aysan taageerayaasha intooda badan ka aqoonin Bayern Munich, waana mid ay kooxda ka aamusneyd muddo 80 sannadood ah.
SIDOO KALE AKHRISO: Jamaahiirta Inter Milan Oo Durtaba Dareemaya Wixii Ay Kuwa Man United Romelu Lukaku Ku Naceen & Romelu Oo Kulanka Furitaanka Ee Serie A Sabab Layaab Leh Ku Seegaya!!.
Bayern waxaa lagu aas-aasay Schwabing, waxaana ay aheyd koox ay yahuuda leeyihiin ka hor dagaalkii labaad ee adduunka, waxaa madaxweyne ka ahaa nin yahuud ah waxaana tababare ka ahaa nin yahuud ah.
Waxaana ay taasi keentay in Bayern Munich ay bartilmaameedsadaan Nazi-yiintii uu hogaaminayay Hitler laakiin ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxda ayaa iska dhegotirayay cagajugleynta xisbigii Nazi-ga.
Markii kooxda la aas-aasayay sannadii 1900, labo ka mid ah 17kii saxiixayaal waxa ay ahaayeen yahuud. Mid ka mid ah waa ninka ku dhashay Dortmund Benno Elkan kaasoo markii danbe u qaxay London islamarkaana noqday nin looga danbeeyo sancada farshaxanka, iyadoo farshaxan uu sameeyay haatan la dhigay albaabka hore ee barlamaanka yahuuda.
Ka soo bilow 1911, Bayern Munich waxaa hogaaminayay Kurt Landauer oo ahaa wiil uu dhalay ganacsade taajir ah oo yahuud ah, waxaana kooxda tababarayaal u noqonayay rag yahuud ah oo uu ku jiro Richard Dombi kaasoo sidoo kale tababare u soo noqday Barcelona iyo Feyenoord.
Landauer oo hogaaminayay kooxda ayaa ku qasbanaaday inuu iscasilo isaga iyo xubinihii kale ee yahuuda ee ku jiray kooxda markii Hitler uu awooda la wareegay, waxaana uu u qaxay Switzerland ka dib 33 maalmood uu ku xernaa Dachau.
Nazi-yiintii ayaa ugu wici jiray Bayern Munich kooxdii yahuuda. Landauer ayaa ku soo laabtay Munich ka dib dagaalkii labaad ee adduunka waxaana uu mar kale madaxweyne ka noqday Bayern Munich ilaa iyo sannadii 1951.
Waqtigaan casriga ah Bayern Munich ayaa ka ganbata inay qirato saameynta ay yahuuda ku lahaayeen kooxdooda iyagoo ka baqaya in heshiisyada ganacsi ay la leeyihiin wadamo Aasiya ku yaala inay wax u dhinto haddii ay buunbuuniyaan taariikhda ay la leeyihiin yahuuda.
Laakiin taageerayaasha mayalka adag ayaa garoonka Allainz Arena waxa ay haatan ku soo bandhigaan magaca Landauer, waxaana ay sidoo kale u qabtaan koob lagu maamuusayo isaga sannad walba.
Bayern Munich ayaa sidoo kale qeyb ka bixisay lacagta lagu aas-aasay kooxaha yahuuda ee TSV Maccabi Munich kuwaasoo dhistay garoon yar oo loogu magacdaray Landauer sannadii 2010. Garoonka waxaa lagu furay kulan saaxiibtinimo oo dhexmaray halyeeyada Bayern Munich iyo kooxda TSV Maccabi Munich.
Richard Dombi magacaasi waa Richard Kohn sida saxda ah